Yekupedzisira guta rekuLithuania rinoshanda sinagogi rinovhara mushure mekutyisidzira kwevaNazi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Yekupedzisira guta rekuLithuania rinoshanda sinagogi rinovhara mushure mekutyisidzira kwevaNazi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • Lithuania Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mushure mekugamuchira kutyisidzira kwakawanda, RituaniyaNzanga yechiJuda yasarudza kuvharira nekusingaperi sinagogi raishanda chete muguta guru re Vilnius. Izvi zvinouya pakati pekunetsana kukuru paruzhinji pamusoro pekukudzwa kwenyika kwevashandi veNazi.
Nzvimbo yechiJuda uye nhoroondo yeChoral Synagogue muVilnius ichavhara kwe "nguva isingagumi," iyo Lithuanian Jewish Community (LJC) yakati mune chirevo pawebhusaiti yavo. Sarudzo iyi yakaitwa mushure mekunge LJC yagamuchira "kutyisidzira kufona netsamba mumazuva apfuura."
MaNationalist uye mapapiro erudyi muguta guru reLithuania vakatsamwa nekubviswa kwedombo rekurangarira mushandi weNazi pamusuwo weLithuanian Academy yeSainzi. Mukufamba kwakafanana, mataundi eVilnius svondo rapfuura akanzidazve zita remugwagwa waive wakatumidzwa zita remumwe mumiriri wenguva yehondo naHitler mubatsiri.
MaLithuania maJuda akarumbidza sarudzo seyakareba - nepo vemunyika vaityisidzira nekuratidzira kwenyika yese mukupindura.